Xoogaga Mucaaradka Suuriya oo isbaheysiga Ruushka ka qabsaday dhul Muhiim ah.
Thursday July 11, 2019 - 21:48:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xoogagga Jihaadiga Sunniga Suuriya ayaa guulo waaweyn kasoo hooyay dagaallo culus oo ay lagaleen ciidamada nidaamka Bishaar Al-Asada iyo kuwa dowladda Ruushka.
Wararka ka imaanaya gobolka Xamaah ee dhaca bartamaha Suuriya ayaa sheegaya in dagaallo culus kadib ay xoogaga Sunniga ah qabsadeen dhowr tuulo oo istiraatiiji ah.
Abuu Khaalid Alshaami oo ah Afhayeenka Jabhadda Xureynta Shaam ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP iyo xoogagoodu ay qabsadeen degmada Al Xaamiyaat iyo dhowr saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada Nidaamka Bishaar Al-Asad.
Dhowr kooxood oo is baheystay ayaa ku guulaystay in dagaal dhiig badan ku daatay kadib ay ciidamada dowladda Suuriya iyo maleeshiyaadka Shiicada ka fara maroojiyeen tuulooyin kuyaal waqooyiga gobolka Xamaah.
Naaji Mustafa oo u hadlay Jabhadda wadaniga Suuriya ayaa warbaahinta u sheegay in xoogagoodu ay iska caabiyeen weeraro rogaal celis ah oo ay soo qaadeen ciidamada Bishaar Al-asad oo kaashanaya ciidamo Iiraaniyiin iyo Ruushiyaan ah balse ay ku guul darraysteen in ay dib uqabsadaan dhulkii lagala wareegay.
Dhinaca kale ugu yaraan 9 qof shacab ah ayaa ku dhintay duqeymo bahalnimo oo markale diyaaradaha ruushka ay ka geysteen gobolka Idlib ee dhaca waqooyiga Suuriya.
Dadka dhintay dhammaantood waxay ahaayeen haween iyo carruur ay sawaariikhda diyaaradaha ruushka ay ugu tagtay guryahooda, dagaalka Suuriya oo 9 sana jirsaday waxaa ku dhintay dad ka badan Nus milyan qof.